နှုတ်ဆက်ခဲ့ လေတာလား အချစ်ဦး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နှုတ်ဆက်ခဲ့ လေတာလား အချစ်ဦး
နှုတ်ဆက်ခဲ့ လေတာလား အချစ်ဦး
Posted by တောတွင်းပျော် on Apr 6, 2015 in Creative Writing | 8 comments
နွဲ့ ဆိုးရယ်၊ နွဲ့ ဆိုးမမ ညိုလေးရယ် ကျနော်ရယ် သုံးယောက်သား တစ်နေရာမှာ ထိုင်နေကြတယ်။ နွဲ့ ဆိုးက ကျနော့ပုခုံးပေါ် သူ့ ခေါင်းလေးမှီချလိုက်တော့ ၊ ကျနော် သူ့ ပုခုံးလေးကို အသာလေး ပြန်ထွေးဖက်ထားလိုက်တယ်။ နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် တတွတ်တွတ်နဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင် စကားတွေ အများကြီးပြောလို့ ။ ညိုလေးနဲ့ကျနော်က ဘာတစ်ခွန်းမှပြန်မပြောဘဲ နွဲ့ ဆိုးပြောသမျှ အသာနားထောင်ရင်းက နွဲ့ ဆိုးကိုစောင်းငဲ့ ကြည့် လိုက်တော့သူ့ မျက်နှာလေး ကြည်လင်ဝင်းပ
ရွှင်ပျလို့ ။ နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် ပြုံးနေရယ်နေတယ်လေ…….
အိပ်ယာကနိုးလာပြီး ဘေးက ဖုန်းနာရီကြည့် လိုက်တော့မနက် ၅ နာရီခွဲတော့ မယ်။ လူက စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင် လန်းလန်းဆန်းဆန်း။ အိပ်ယာကမထသေးဘဲ စောစောက မက်ခဲ့ တဲ့အိပ်မက်အကြောင်းကို တွေးနေမိတယ်။ နွဲ့ ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိပ်မက်ထဲ အခုလို ထင်ထင်ရှားရှား တစ်ခါမှ
မမက်ခဲ့ ဖူး။ ဘာလို့ဒီမနက်မှ ထူးထူးဆန်းဆန်း သူ့ ကိုမက်နေရပါလိမ့် ။ နောက်ပြီး နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် စကားတွေအများကြီးပြောလို့ ။ ပြုံးလို့ ရွှင်လို့ ။ သူ့ ကို အခုလိုမြင်တွေ့ လိုက်ရတော့ရင်ထဲမှာ နွေးထွေးသွားသလို၊ စိတ်တွေကလည်း လည်ပြန် သတိရလွမ်းဆွတ်မိပြန်တယ်။
ဆက်ပြီးပြန်အိပ်မပျော်နိုင်တော့အိပ်ယာထဲက အသာထွက် မီးဖိုချောင်ဖက်ဆီကူးလိုက်တော့စားဖိုမှူးအမကြီးတစ်ယောက် ဘက်ထရီ မီးချောင်းအလင်းရောင်အောက်မှာ အလုပ်ရှုပ်ရှက်ခတ်လို့ နေရဲ့့။
သူ့ ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့် ပြီး မီးဖိုချောင် အနောက်ဖက်က စမ်းချောင်းထဲ ဆင်းချလိုက်တယ်။ အေးစက်စက်
စမ်းချောင်းရေအထိကြောင့်လူကိုလန်းဆန်းသွားစေတယ်။
စမ်းချောင်းလေးထဲက ပြန်တက်လိုက်ပြီး ကော်ဖီကြမ်းပူပူသောက်ဖို့ထမင်းစား စားပွဲရှည်မှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တော့စားဖိုမှူးအမကြီးက မနိုးစဖူး အစောကြီးထလာတဲ့တောတွင်းပျော်ကို ကြည့် ပြီး၊
“ နင်၊ ဒီမနက် အိပ်ယာထစောလိုက်တာ။ ဘာလုပ်ဖို့ ရှိလို့ လဲ”
“ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဒီနေ့နေထွက်တာ နောက်ကျလို့ ပါ အမ!”
တောတွင်းပျော်ရဲ့အူကြောင်ကြောင်အဖြေကြောင့်အမကြီး ကျနော့ ဖက်လှည့် လာပြီး နှုတ်ခမ်းတစ်ချက်တွန့် ပြပြီး မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်။ သူ့ စိတ်ထဲမယ်တော့မနက်အစောကြီး
တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် ဘာတွေပေါက်သွားပါလိမ့်တွေးနေမလား။
ကျနော် စကားပြောချင်စိတ်မရှိ။ စောစောက အိပ်မက်လေးကိုပဲ ဆက်တွေးနေချင်တယ်။ အိပ်မက်ထဲက ပြုံးချိုချို နွဲ့ ဆိုးမျက်နှာလေးကို ပြန်မြင်ချင်တယ်။ နွဲ့ ဆိုး မှီခဲ့ တဲ့ကျနော့ ညာဖက် ပုခုံးပြင်မှာ နွဲ့ ဆိုးလေးရဲ့ 
ကိုယ်သင်းနံ့ လေးကျန်ခဲ့ သေးသလား ယောင်ရမ်း နမ်းရှိုက်မိလိုက်ရဲ့ ။
မနက်စောစော မိုးမလင်းခင် ကော်ဖီကြမ်းတစ်ခွက်နဲ့တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် တငူငူတငေါင်ငေါင်နဲ့ 
လွမ်းငွေ့ တွေက တဝေဝေ။
နွဲ့ ဆိုး…….
ဒီနေ့ တောင်ပေါ်က နောက်ဆုံးလက်ကျန် သစ် ၂ ခေါက်စာကဲ့ ပြီးတာနဲ့ ဆို အခုလုပ်နေတဲ့သစ်လုပ်ကွက် အပြီးသတ်သွားပြီး။ ဒီလိုနောက်ဆုံးရက်မှ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဒီလို အိပ်မက် မက်လာတော့ဒီနေ့အလုပ်အတွက် စိတ်ကလေးချင်ချင်။ အတိတ်လား၊နမိတ်လား။ အိပ်မက်က တောက်လျှောက် စိတ်ထဲဖိစီး
နေလို့အလုပ်ထဲဝင်ရမှာ စိတ်ကမပါချင်သလိုလို။
မနက် ၈ နာရီလောက် တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားတော့အဲဒီမှာ ဖုန်းလိုင်းရတာမို့KL မှာနေတဲ့အမတော်လေးဆီကို ဖုန်းဆက်ကြည့် လိုက်တယ်။ သူက နွဲ့ ဆိုးနဲ့ကျနော့ တို့ရဲ့့အောင်သွယ်တော်ကြီးမို့ 
ကျေးဇူးရှင် အမတော်လေးဆိုပြီး နာမည်ပြောင်ခေါ်တာ။ သူနဲ့နွဲ့ ဆိုးက ကျောင်းဆရာမ အတူလုပ်ဖက်၊
နွဲ့ ဆိုးက ကျောင်းဆရာမကတဆင့်သူနာပြုအောင်ပြီး သူနာပြုဆရာမဖြစ်သွားပြီး အမတော်လေးက
ကျောင်းဆရာမကတဆင့်ဂျီတီအိုင်အောင်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်မရနိုင်လို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့သူ့ မောင်တွေဆီ လွင့် လာတာ။
ဖုန်းကတော်တော်နဲ့မကိုင်။ ကိုင်မယ့် ကိုင်တော့ လည်း…
“ဘာကိစ္စလည်း တောကောင်၊ ဒီအချိန် ငါ့ အိပ်ချိန်ဆိုတာ နင်မသိဘူးလား။ ပြောစရာရှိတာ မြန်မြန်ပြော”
“အေးပါကွာ၊ သိပါတယ် ခင်ဗျာ…။ ညက ငါမက်ခဲ့ တဲ့အိပ်မက်အကြာင်း နင့် ကို ပြောပြချင်လို့ ပါဟ။”
“အမလေး..လေး! တောတွင်းပျော်ရယ် နင့် ရဲ့သွေးလေခြောက်တဲ့ပေါက်ကရအိပ်မက်အကြောင်း နားထောင်ရမယ်လို့ ။ ငါ အတိတ်ကောက်ပြီး ချဲထိုးပေးရမှာလား။” အမတော်လေးရဲ့လေသံကခနဲ့ တဲ့ တဲ့ ။
“နင်၊ စိတ်လောမကြီးနဲ့ အုံးလေး။ ငါပြောတာကို ဆုံးအောင်နားထောင်ပေးအုံး။ ငါ နွဲ့ ဆိုးကို အိပ်မက် မက်
“ဒါများ… နင်သူ့ ကို စိတ်စွဲနေလို့ ပေါ့ ။ အဆန်းလုပ်လို့ ။”
“ဒီလိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေ! ငါ သူ့ ကို ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှ မမက်ဖူးဘူး။”
“ဒါဆိုလည်း သူနင့် ကို သတိရလို့ ၊ ဟုတ်ပြီလား။ ကျေနပ်ပြီးလား။ တော်ပြီ၊ တော်ပြီ ။ ငါ့ မှာ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး သူများ အိပ်မက် နားထောင်နေရတယ်လို့ တော်။”
အမတော်လေးနဲ့စကားပြောရတာ လက်ပေါက်ကတ်လိုက်တာ။ သူ့ အိပ်ချိန်ကို အနှောက်အယှက်ပေးမိလို့ 
အမတော်လေး တော်တော် စိတ်တိုနေတယ်။ ကျနော်လည်း ကျနော့ ကို စကားကောင်းကောင်း ပြန်မပြောတဲ့ 
“ နင်ကလည်းဟာ၊ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရင်ဖွင့် ပြောရမယ်သူဆိုလို့နင်တစ်ယောက်ပဲရှိတာ။ ဒါလေးတောင်မှ နားလည်းမှုမပေးနိုင်ဘူး။ နင် လင်ရရင် အသက်ကြီးကြီး တစ်ခုလတ်၊မုဆိုးဖိုနဲ့ ရ ပါစေ။”
“ နင့် အပူ တစ်ပြားမှ မပါဘူး တောကောင်၊ နောက်မှ နင့် ကိုကောင်းကောင်းပြန်နွှာရမယ်။ အခု ငါအိပ်ချင်တယ်။” အမတော်လေးဆီက ဖုန်းပိတ်လိုက်တယ်။
သစ်တင်ပြီးတာနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေကားကို ခါတိုင်းထက် ပိုသတိထား ဂရုစိုက်ထိန်းရင်း တဖြည်းဖြည်းချင်း
ဆင်းချလိုက်တယ်။ တောင်ထိပ်ဆိုတာက ဒီမန္တလေးဂေဇက်မှာ တင်ခဲ့ ဖူးတဲ့အောက်ချင်းငှက်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ တဲ့ တောင်။ တချို့ နေရာတွေမှာ ၃၅ ဒီဂရီ၊ ၄၀ ဒီဂရီ လောက်နီးနီး ဇောက်ထိုးဆင်းရတဲ့အရှည် ၃ ကီလိုမီတာလောက်ရှိတဲ့အဆင်းရှည်ကြီး။ ကားတွေက တောလမ်းကြမ်းမှာ သစ်တင်ဖို့Modified ဆင်ထားတာမို့ဒီလိုလမ်းတွေမှာ သွားနိုင်တာ။ ဘရိတ်ဒရမ်ကို ရေနိုင်နိုင်ဖြန်းရင်း သတိထားမောင်းနေရင်းက
မနက်စောစော မက်ခဲ့ တဲ့အိပ်မက်က ခေါင်းထဲ တစ်ချက်စ်ချက်ဝင်လာပြီး
ရင်တဖိုဖိုဖြစ်နေရသေး။ ဒုတိယအခေါက် သစ်ချကွင်းအရောက် သစ်ချပြီးတော့ မှပဲ စိတ်ကဒုန်းဒုန်းချနိုင်တော့ တယ်။ အိပ်မက်ကြောင့် ၊ လမ်းကြမ်းကြောင့်လေးလံနေတဲ့ စိတ်တွေ အခုမှပဲ ပေါ့ သွားတော့ တယ်။ တကယ်တော့အိပ်မက်က သာမန်အိပ်မက်ပါလား။ ကိုယ့် ဘာသာ အတွေးလွန်ပြီး အစိုးရိမ်ကြီးနေခဲ့ တာ။
သစ်ဆိုဒ်ကုန်သွားပြီ။ ကားကို checking လုပ်၊ ပြင်သင့် သာပြင်။ နောက်စခန်းမှာရှိတဲ့သစ်ဆွဲ bull dozer
သစ်တင် excavator , loader တွေ စစ်ဆေးပြီး ပြင်ရမယ့် ဟာတွေ သူဋ္ဌေးကိုပြောပြခဲ့ ပြီး နောက် ၁၀ ရက်လောက်အကြာမှာ KL ကို ဆင်းဖို့Kuantan ကိုထွက်ခဲ့ တယ်။ မွန်းလွဲ ၂နာရီ kuantan bus terminal
က စအထွက် KL က အမတော်လေးဆီ ဖုန်းကနေ စာကြောင်းတိုလေး ပို့ လိုက်တယ် ။
“ ငါတောထဲက ထွက်လာပြီ”
“ ငါ့ ကို Ph call ပါ” အမတော်လေးဆီက စာပြန်ဝင်လာတယ်။ ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့ …
“ တောတွင်းပျော် နင့် ကို ပြောစရာရှိတယ်။ နင့် ကောင်မလေး ဆုံးသွားပြီဟ!” ရုတ်တရက်ကြီး ဆိုင်းမဆင့် 
ဗုံမဆင့် ။ နွေခေါင်ခေါင်ကြီးမှာ ရုတ်တရက် မိုးကြိုးပစ်ထည့် လိုက်သလို။
“နေစမ်းပါအုံး၊ ငါ့ ကောင်မလေးဆိုတာ ဘယ်တစ်ယောက်လည်းဟ! နင့် လေသံကြီးက ဝမ်းသာအားရ လေသံ
“တော်စမ်း… တောတွင်းပျော်၊ ဘယ်တစ်ယောက်လဲ ဟုတ်လား..
ငါ့ ကိုအထင်ကြီးအောင် ပြောမနေစမ်းနဲ့ ။ နင့် အကြောင်း ငါကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဘယ်တစ်ယောက်လဲ
ဟုတ်လား… သိချင်လား..။ နွဲ့ ဆိုးဟဲ့နင့် ရဲ့ အချစ်ဦးနွဲ့ ဆိုး၊ နင့် ရဲ့ အသည်းလေးနွဲ့ ဆိုး…
သိပြီလား။ ဘာအစွမ်းအစမှ မရှိတဲ့နင့် လိုကောင်ကများ ငါ့အထင်ကြီးအောင်လို့ ။ ဟား..ဟ
ရီချင်တယ်။ နွဲ့ ဆိုးတောင် ငါ အောင်သွယ်ကောင်းလို့နင်တို့ အဆင်ပြေသွားတာဟဲ့ ။ အမတော်လးပြောနေတာကလည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်မို့ငြိမ်ခံနေလိုက်တယ်။ အမတော်လေးဆီက ပိဿာလေး
ဘေးပစ် စကားလုံးတွေက ဆက်တိုက်ထွက်လာလိုက်တာ တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် ရစရာတစ်စက်မှ
မကျန်တော့ လောက်အောင်။ တလောက သူ့ အိပ်ချိန်ကို တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ
ဖုန်းနဲ့ သွားနိုးပြီး အ်ိပ်မက်အကြောင်းနားထောင်ခိုင်မိလို့နင့် ကိုကောင်းကောင်းပြန်နွှာမယ်ပြောခဲ့ တာ အငြိုးနဲ့ များ ပြန်တွယ်နေရော့ သလား။
အမတော်လေး ပြောနေတာကို ကြားတစ်ချက်၊ မကြားတစ်ချက်နဲ့အာရုံထဲမှာတော့ရွှင်ရွှင်ပျပျရယ်မောနေတဲ့ 
နွဲ့ ဆိုးမျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်နေတယ်။ အတောမသတ်နိုင်တဲ့အမတော်လေးရဲ့စကားကိုအတင်းလုဖြတ်ပြီး
“နင်ကလည်းကွာ၊ နွဲ့ ဆိုးဆုံးသွားတာ ဟုတ်ပါ့ မလားကွာ၊ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နင် ဘယ်အပေါက်က ကြားလာရတာလည်း။ နွဲ့ ဆိုး အရွယ်က သေရမယ့်အရွယ်မှ မဟုတ်သေးတာ။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးပဲ
“နင်အတွက် ငါ တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟာ တောတွင်းပျော်။ တစ်နေ့ က ငါ့ အမ မွန်မွန်ခိုင်ဆီက မေးလ်
မွန်မွန်ခိုင်ဆိုတာက စာပေဆိုင် နာမည်လေးတစ်ခုပါ။ အမတော်လေးရဲ့အမက ကုန်စုံဆိုင်လေးနဲ့ တွဲပြီး မွန်မွန်ခိုင်စာပေလေး ဖွင့် ထားတာ။ ကျနော်တို့ ကတော့မွန်မွန်ခိုင်စာပေလို့မခေါ်ဘဲ ကုန်မျိုးစုံစာပေ လို့ ပဲ
ခေါ်တယ်။ နောက်ပြီး ဒီစာပေလေးက ကျနော်နဲ့နွဲ့ ဆိုးရဲ့ စာပေးစာယူရာ အချစ်စာတိုက်လေး…..
သူ့ အမ မွန်မွန်ခိုင်ဆီကဆိုတော့ရုတ်ချည်းဆိုသလို တောတွင်းပျော်တစ်ကိုယ်လုံး ပျော့ ခွေညွှတ်ကျသွားချင်သလို။ ဒါဆို နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက်ဆုံးသွားတာသေချာပြီပေါ့ ။
အမှန်တရားက တကယ်ဖြစ်ခဲ့ ပြီပဲကိုး။ အတွင်းစိတ်ကတော့ဒါကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံယုံကြည်လို့ မရသေး။
“ အမတော်လေး…နင် ငါ့ ကို နောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ငါဘယ်လိုမှ မယုံနိုင်ဘူး။
သူသေရမယ့် အရွယ် မဟုတ်သေးဘူးလေ အမတော်လေးရဲ့ ”
ကျနော့ စကားသံတွေက ငိုသံစွက်လာတယ်။
“ တောတွင်းပျော်ရယ်၊ ငါလည်း အစက ဘယ်လိုမှ မယုံနိုင်ခဲ့ ဘူး။ သူနဲ့ ငါက အချိန်အများကြီး အတူတူ
အလုပ်၊ လုပ်လာခဲ့ တာ။ ငါသူ့ အပေါ်ထားတဲ့သံယောဇဉ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထက် ညီမလေးတစ်ယောက်လို ချစ်ခဲ့ တာ။ သူဆုံးသွားတာ ငါလည်း အရမ်းခံစားရတယ်။ အခု သူငါတို့ ကို
ထားခဲ့ ပြီ။ သူမရှိတော့ ဘူး တောတွင်းပျော်ရဲ့ ”
ပြောနေရင်း အမတော်လေးဆီက ငိုသံတွေထွက်လာတယ်။
“နေအုံး၊ နေအုံး မငိုပါနဲ့ အုံး အမတော်လေးရဲ့ ။ တကယ်ဆို ငါက စပြီးငိုရမှာလေကွာ။ အခု နင်ကစပြီး…”
“ တောကောင်…ဘာလို့ငါ့ ကို ဝမ်းသာအားရလေသံကြီးန့ဲ လု့ိ ပြောရတာလည်း။ နင် ဒီလိုပြောတော့ငါ
အရမ်း ဝမ်းနည်းတာပေါ့ ။ ငါ့ မှာလည်း သူငယ်ချင်းညီမလေးတစ်ယောက်လုံး ဆုံးသွားရတာ။”
“ အေးပါကွာ.. ငါတောင်းပန်ပါတယ်နော်..
ဒါနဲ့အကျိုးအကြောင်းလေး ဘာလေးပြောပြအုံးလေ။ သူဘယ်တုန်းကဆုံးတာလည်း။ ကြာပြီလားဟင်။”
“လွန်ခဲ့ တဲ့ တစ်ပတ်ကျော်… ခဏ၊ ငါစဉ်းစားကြည့် လိုက်အုံးမယ်။ ဟယ်… ထူးဆန်းလိုက်တာ တောတွင်းပျော်။ ဒါတိုက်ဆိုက်တာ မဟုတ်လောက်ဘူး။ သူဆုံးသွားတာ နင် ငါ့ ဆီကို နွဲ့ ဆိုးကို အိပ်မက်
မက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ရက်ပိုင်းလောက်ကပဲ။ ဒါ.. ဒါဆို နွဲ့ ဆိုး သူသွားတော့ မယ့်အကြောင်း
နင့် ကိုလာသတိပေး နှုတ်ဆက်သွားဖြစ်မယ်။ သေချာတယ်… သူ နင့် ကိုလာနှုတ်ဆက်သွားတာ။
သူ နင့် ကို သူ့ ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတောင် သတိတရရှိနေခဲ့ တာ။ ငါ အံ့သြလိုက်တာ တောတွင်းပျော်ရယ်။”
အမတော်လေး ပြောနေပုံက အလောတကြီးနဲ့စိတ်လည်းတော်တော် လှုပ်ရှားသလိုပဲ။ ကျနော်လည်း မျက်ရည် တတွေတွေကျလာတယ်။
“သူကသာ နင့် ကို သူနောက်ဆုံးချိန်လေးမှာတောင် သတိတရရှိနေခဲ့ တာ၊ နင်ကတော့နင်စိတ်ထဲမှာ
နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက်ဆိုတာရှိသေးရဲ့ လား… နင် သူ့ ကို မေ့ ထားလိုက်ပြီ မဟုတ်လား တောတွင်းပျော်ရဲ့ ”
ဖြစ်ရပြန်ပြီ။ အမတော်လေးရဲ့မြားဦးတွေက နောက်ဆံုးတော့တောတွင်းပျော်ဆီကိုပဲ ပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်။ သူလည်း သူ့ ညီမတော်လေးအတွက် တော်တော်လေး မချိတင်ကဲ ခံစားနေပုံပဲ။
“ ငါ နွဲ့ ဆိုးကို သတိမရဘဲရှိပါ့ မလား အမတော်လေးရယ်။ ငါ သူ့ ကို အမြဲသတိရပါတယ်ဟာ။ ငါ သူ့ ကို သတိရလေတိုင်း ငါကြေကွဲနေရတာ နင်လည်းသိပါတယ် အမတော်လေး။”
ကျနေတဲ့မျက်ရည်တွေကို သုတ်လိုက်ပြီး bus အပြင်ဖက်က တရိပ်ရိပ်ကျန်ခဲ့ တဲ့မြင်ကွင်းတွေကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ငေးကြည့်နေလိုက်မိတယ်။
မောင်နှမ ၃ ယောက်ထဲက သမီးထွေးလေး။ ကျနော့ ထက် ၁ နှစ်ငယ်ပေမယ့်တခါတခါ ဆရာမကြီးတစ်ယောက်လို ကျနော့ ကို အနိုင်ကျင့် တတ်ပြီး တခါတခါကျပြန်တော့ လည်း အကိုကြီးတစ်ယောက်လို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံတတ်တဲ့နွဲ့ ဆိုး။
တခါက သူ့ အမေရဲ့ပုခုံးကို ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ပြေးဖက်၊ ကျနော့ ဖက်ကိုလှည့် ပြီး
“ အမေ၊ သူက သမီးရဲ့ချစ်သူလေ” ဆိုပြီး ခပ်ပြောင်ပြောင် ဖွင့် ချပြောပြီး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့နွဲ့ ဆိုး။
ကျနော့ မှာ အရှင်လတ်လတ်မြေမြိုခံချင်လိုက်ရအောင် မျက်နှာထားစရာမရှိအောင် ရှက်နေတဲ့ အဖြစ်ကို သူတို့သားအမိကကြည့် ပြီး ရီနေကြသေးတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့သူ့ အမေနဲ့ရင်းနှီးနေလို့ ။ စိတ်ထဲမယ် ဘာမှချန်မထား ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောဆိုတတ်တဲ့နွဲ့ ဆိုး….
အခု သူမရှိတော့ ဘူးတဲ့ …
ကျနော့ တစ်ကိုယ်လုံး ချက်ချင်း အခိုးအငွေ့ ဖြစ်ပြီး အစအနမကျန်အောင် လွင့် ပျောက်သွားချင်လိုက်ရဲ့ ။
အသက်ရှင်ကျန်နေတာက ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတော့ သလိုပါလား…….
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းရှိနေရင် စိတ်ရှိလက်ရှိ ပေါက်ကွဲငိုချလိုက်ချင်တယ်။ စိတ်ထိန်းချုပ်ထားရတာ မွန်းကျပ်လွန်းလှပါတယ်ဗျာ……
ဖုန်းထဲက အမတော်လေးရဲ့ အသံက ဝင်လာတယ်။
“ တောတွင်းပျော်၊ နင် ငိုနေတာလား.. နင့် ကိုယ် နင် သတိထားထိန်းအုံးနော်… KL ရောက်ရင် ငါ့ ဆီကို လာလည်အုံး”
“ ဟ! ဒီလောက် လူအပြည့် နဲ့ကားထဲ တရှုံ့ ရှုံ့ နဲ့ ငါငိုလို့ ဖြစ်ပါ့ မလား။ စိတ်ချပါ .. ငါ့ ကိုယ်ငါ ထိန်းနိုင်ပါတယ်။”
ဒါဆိုလည်း ငါ နင့် ကို စိတ်ချလိုက်မယ်။ တော်ကြာ နင် စိတ်မထိန်းနိုင် လုပ်ချင်တာ လျှောက်လုပ်နေမှာစိုးလို့ ။
နွဲ့ ဆိုးက သူတာဝန်ကျတဲ့ရွာမှာ အလုပ်၊လုပ်နေရင်းက နေမကောင်းလို့သူ့ အိမ်အပြန် လမ်းတဝက်မှာဆုံးသွားတာ။ သူ့ ကိုတော့သူ့ မြို့ မှာပဲ သင်္ဂြုလ်လိုက်ပြီးပြီ။ ဒါ ငါ့ အမဆီက သိရသလောက်ပါ။
နောက်ထပ် ငါစုံစမ်းနေတုန်းပါ။ KL ရောက်ရင် ငါ့ ဆီကိုလာဖြစ်အောင် လာခဲ့ ။ ကြားသလား တောတွင်းပျော်”
“အေးပါဟာ အမတော်လေးရာ။ ငါငိုချင်တယ်ကွာ…
ငါရောက်လာရင် နင် ဘီယာ ၆ ဗူး လောက်ဝယ်ထားပေးပါလား”
“ဘီယာ ၆ ဗူး..!” အမတော်လေးရဲ့လေသံကမြင့် တက်သွားတယ်။
“ ဘာလဲ.. နင်က ဘီယာမူးပြီး ခံစားချက်တွေ မေ့ လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ နင် မူးလို့အိပ်ပျော်သွားချိန်
လောက်မှာသာ မေ့ လို့ ရပေမယ့်နင်နိုးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒါကိုပဲ သတိရနေပြီး ပြန်ခံစားနေရမှာပဲ။ သောက်နေလို့ ကော ဘာထူးမှာလဲ တောတွင်းပျော်။”
“နင်ပြောတာတွေ မဟုတ်သေးဘူး အမတော်၊ ငါက ဘီယာမူးပြီး ခံစားချက်အပြည့် နဲ့ငိုချင်လို့ ”
“ဘာ..! ခံစားချက်အပြည့် နဲ့ငိုချင်လို့ဟုတ်လား။ နင့် ငိုသံကြီးကို နားထောင်ဖို့ငါက ဘီယာဝယ်တိုက်
“တော်စမ်း၊ တောတွင်းပျော်… နင့်ကျက်သရေမရှိတဲ့ငိုသံပြဲကြီးကိုလည်း နားမထောင်နိုင်ဘူး။ ဘီယာလည်း
ဝယ်မတိုက်နိုင်ဘူး။ ငါ့ ဆီကိုလည်း မလာနဲ့ တော့ ။” အမတော်လေး တော်တော်လေးကို တရှူးရှူးရှဲရှဲဖြစ်နေတယ်။
“နင် ငါ ကို မသနားဘူးလားဟာ.. ငါ့ မှာ ငယ်ချစ်ဦးတစ်ယောက်လုံး ဆုံးသွားတာ။ ဘီယာမတိုက်နိုင်ရင်လည်း
မတိုက်ခိုင်းတော့ ပါဘူး။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ တော့ နော်။.. ဟုတ်ပြီလား။”
အမတော်လေးဆီက အတော်ကြာတိတ်နေပြီး နောက်မှ လေသံပြေပြေနဲ့ 
“ ကောင်းပြီလေ! နင်စကားပြောရင် ကောင်းကောင်းပြော။ ငါစိတ်ကို လာ လာ မဆွနဲ့ ”
“အေးပါ၊ အေးပါ.. ငါအကောင်းပြောပါ့ မယ် ။ဒါနဲ့ .. နင့် ကို နွဲ့ ဆိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့ ပါ။” ကျနော့ ရဲ့အက်တက်တက်လေသံကြောင့်ကျနော် အတော်လေး ခံစားနေရတာရိပ်မိသွားပြီး ချက်ချင်းပဲ..
“ ငါ ဘာကူညီပေးရမလဲတောတွင်းပျော်၊ အခုချိန်မှာ ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ ဘူး။ သူရှိတဲ့နေရာနဲ့ငါတို့ က
အဝေးကြီးမှာ။ ငါ့ အနေနဲ့သူ့ နာရေးသတင်း ဆက်စုံစမ်းပေးဖို့ ပဲ တတ်နိုင်တယ်။”
“ နင့် ကိုလည်း ဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူး အမတော်လေး ။ နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် သူ့ နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ ငါ့ ကို သတိတရ လာနှုတ်ဆက်သွားတာကို တွေးပြီး ငါ အရမ်းစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဟာ။ သူလာနှုတ်ဆက်သွားတာကို
ငါမသိခဲ့ ဘူး။ အိပ်မက်ထဲမှာ သူပြောတာကိုပဲ နားထောင်နေခဲ့ ပြီး စကားတစ်ခွန်းမှ သူ့ ကို ပြန်မပြောခဲ့မိဘူးကွာ။ သူ ငါ့ ဆီက စကားတစ်ခွန်းခွန်းတော့ကြားချင်နေခဲ့ မှာ။ ဒါကို တွေးလေ၊ တွေးလေ ငါ ပိုပြီး ယူကျူံးမရဖြစ်ရလေပဲ။ တကယ်ဆို ငါ သူ့ ကို တစ်ခုခုတော့ပြန်ပြောရမှာ။”
“ ဒါကတော့အိပ်မက်ပဲလေ တောတွင်းပျော်။ ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ လိမ့် မယ်လို့နင်လည်းကြိုသိခဲ့ တာမှ မဟုတ်ဘဲ။
နင့်ခံစားချက်ကို ငါနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ပြန်မပြောခဲ့ တာကိုတော့နောင်တ တစ်ခုလို မခံစားစေချင်ဘူး။ အိပ်မက်ကို လက်တွေ့ တစ်ခုလို သဘောထားနေရင်တော့နင်ပဲ အရမ်းပင်ပန်းနေရလိမ့်မယ်။ နင်စိတ်ဖြေလိုက်စမ်းပါ သူငယ်ချင်းရာ။ နင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာချမ်းသာဖြစ်နေတာ ငါမြင်ချင်တယ်။ ပြော…… ငါနင့် ကို ဘယ်လို ကူညီပေးရမလဲ..။”
ကျနော် အမတော်လေးကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ တကယ်တန်း သူက အကူအညီပေးလာမယ်ဆိုတော့ 
ဘာတောင်းရမှန်းမသိတော့ ။ ခုနက စိတ်တွေကထွေပြားနေပြီး အားကိုးမြင်ရာ ကောက်ရိုးမျှင်တစ်ခုလို
ပြောမိပြောရာ ပြောခဲ့ မိတာ။ အခုချိန်မှ ဘာမှမပြောတော့ ပြန်ရင်လည်း အမတော်လေး စိတ်က…
“ဒီလိုပါဟာ၊ တကယ်လို့ များ နင်သွားရင်း လာရင်းနဲ့နွဲ့ ဆိုးရှိတဲ့ နေရာ လမ်းကြုံလို့ များ ရောက်ခဲ့ ရင် ပေါ့ လေ
ငါ ချစ်တဲ့နွဲ့ ဆိုးလေးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါဟာ။ သူ့ ကို ချစ်တဲ့တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် တောတွင်း တစ်နေရာကနေ သူ့ ကို
တမ်းတ တ တ”
ကျနော့ စကားတောင် မဆုံးလိုက်သေး။ အမတော်လေးဆီက
ပြင်းထန်လှတဲ့ပေါက်ကွဲသံတစ်ခုက ဖုန်းစပီကာ ကနေတဆင့်နားစည်ပြင်ကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လွင့် စင် ရိုက်ခတ်လာတယ်။ ကျနော်ပြောနေတာကို အစကငြိမ်နားထောင်နေပြီးမှ နောက်မှ သဘောပေါက်သွားဟန်တူတယ်။
“နင့် ရဲ့ရူးကြောင်ကြောင်ခံစားချက် ကဗျာစာသားတွေ ရွက်ပြဖို့ ၊ ငါက နွဲ့ ဆိုးဆီ သွားရမယ်ဟုတ်လား။
ဒီလောက်တောင် ခံစားပြချင်နေရင် နင်ကိုယ်တိုင် နွဲ့ ဆိုးဆီလိုက်သွားပြီး ရွက်ပြ။ မဆီမဆိုင် ငါ့ ကို သေခိုင်းမနေနဲ့ ။ နေနှင့် အုံး… ဒီတစ်ခါ နင့် ကိုတွေ့ လို့ ကတော့အရှင်လတ်လတ် အရေခွံဆုတ်ပြီး ဆားနယ်ပစ်လိုက်မယ်။” အမတော်လေးဆီက စက်သေနတ်အတွဲလိုက်ပစ်သံတွေ တရစပ်ထွက်လာပြန်ပြီ။
“နင်ကလည်းကွာ… ဒေါသကြီးလိုက်တာ၊ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းမို့အကူအညီတောင်းကြည့် တာပါ”
ကမန်းကတန်းပြောပြီး ဖုန်းပိတ်ချလိုက်တယ်။ ဟိုတဖက်မှာတော့အမတော်လေး ဒေါထွက်ပြီး ပွစိပွစိ ဖြစ်ကျန်နေခဲ့ မှာ။ သေခြင်းတရားကို စကားလေးးတစ်ခွန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမိလို့တီကိုဆားတို့ မိသလို
သူ့ မှာ တဆတ်ဆတ်။ အင်း…! သူက အိမ်ထောင်တောင်မှ မပြုရသေးတာ။
လူ့ လောကကြီးမှာ နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် မရှိတော့ ပါ။ နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် ကျနော့ ကို လာနှုတ်ဆက်ပြီး ခရီးဝေးကြီးကိုထွက်သွားနှင့် ပြီး။ ဒီခရီး ဘယ်လောက်ဝေးမယ် ကျနော် မခန့် မှန်းနိုင်။ သေချာတာကတော့ 
သူဘယ်တော့ မှ ပြန်လာတော့ မှာ မဟုတ်တော့ ပါ။
ကျနော် နွဲ့ ဆိုးတို့ ရှိရာအရပ်ကနေ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာပြောင်း၊ အမေတို့ ရွာကိုရောက်တော့ကျန်ခဲ့ တဲ့ 
နွဲ့ ဆိုးကို အဆက်အသွယ်ပြန်မလုပ်နိုင်ခဲ့ တော့ ။ အဲဒီအချိန်က ခုလို ဖုန်းတွေလှိုင်လှိုင်မပေါ်သေး။ အင်တာနက်ဆိုတာကလည်း ထူးဆန်းတဲ့ နတ်ကဝေတစ်ပါးလို မြင်နေရတုန်း။ ကျနော်လည်း ထိုင်းဖက်ရောက်လိုက်၊ မလေးဖက်ရောက်လိုက်။ ပင်လယ်ထဲဆင်းလိုက်၊ ကုန်းပေါ်တက်လိုက်နဲ့ 
ဝမ်းရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရတာမို့နွဲ့ ဆိုးကို လွမ်းဆွတ်သတိရရုံကလွဲပြီး အဆက်အသွယ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကြာလာတော့ လည်း နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် ဒီချိန်ဆို ချစ်သူအသစ်တစ်ယောက်ယောက်တော့ 
ရှိနေလောက်ရောပေါ့ဆိုတဲ့ အတွေးက ရင်နာနာနဲ့ ဝင်လာတယ်။ နောက်ပိုင်း ဖုန်း၊အင်တာနက်တွေ အားကောင်းလာတော့သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်ရပြီး ကြားလိုက်ရတာကတော့ 
နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျသွားပြီတဲ့ လေ။
ဘာများတတ်နိုင်အုံးမှာလဲ…။ ဘယ်သူ့ ကိုများ အပြစ်ပုံချရမှာလဲ….
ကိုယ့် ကြမ္မာက ဒီလိုဖြစ်ဖို့ ဖန်လာခဲ့ တာပဲ။
ကာမပိုင်လင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက်ကို အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ နိုင်ကြပါစေလို့အဝေးက ဆုတောင်းပေးရုံလောက်သာ တတ်နိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ တောင် အဆက်အသွယ်ပြန်မလုပ်တော့ ပါ။
မဆက်စပ်နိုင်တော့ တဲ့လက်တွေ့ ဘဝမှာ အတိတ်ကအရိပ်တွေကြောင့် လည်း ဆက်ပြီး စိတ်မပင်ပန်းချင်တော့ ။ မေ့ နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပြီး မေ့ လိုက်ရုံသာ။ ကျနော်ကသာ ကြိုးစားမေ့ ခဲ့ 
ပေမယ့်နွဲ့ ဆိုးလေးကတော့ကျနော့် ကို အမြဲသတိတရရှိနေခဲ့ ပုံပဲ။ သူ့ ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် မြောနေချိန်လေး
မှာတောင် လာနှုတ်ဆက်ခဲ့ သေးတာ။
ဒီနှစ် သြဂုတ် ၂ ရက် ဆို နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် ကျနော့ ကို လာနှုတ်ဆက်သွားတာ ( ) နှစ်ပြည့် တော့ မယ်။
တစ်နေ့ နေ့ ၊ တစ်ချိန်ချိန် မြန်မာပြည်မှာ အေးအေးဆေးဆေးပြန်နေနိုင်တဲ့တစ်နေ့ ကျရင်၊ တောင်ပေါ်မြေလေးက နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် ထာဝရလဲလျောင်းနေရာနားမှာ နွဲ့ ဆိုးချစ်တဲ့ချယ်ရီပန်းပင်လေး
သွားစိုက်ပေးရင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါအုံးမယ်။ တောတွင်းပျော်ချစ်တဲ့နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘဝမှာ
ဒီပိုစ်ရေးနေချိန်တောင်မှာ အိပ်မက်ထဲက စကားတွေအများကြီးပြောနေတဲ့နွဲ့ ဆိုးမျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်မိနေတယ်။ နွဲ့ ဆိုးတစ်ယောက် ပြုံးနေ၊ ရယ်နေတယ်လေ…
ထွေးပွေ့ ရန် ဟန်ကိုချီ…..
မပြယ်သ ဒီခဏ ယဉ်စစနဲ့ 
ရင်ထဲမှာ မေ့ လို့ မရပြီ
( ဒီ ) အိပ်မက်လှပန်းချီ…
နွမ်းလျသူ ရင်မှာမောရပြီ။ (ရေး/ဆို၊ ဇိန်ဇမာန် )
ကျနော့ ရဲ့ဒီပိုစ်လေးကို ဖတ်မိကြတဲ့ဂေဇက်စာဖတ်ချစ်သူများခင်ဗျာ…..
တကယ်လို့ များ သွားရင်းလာရင်းနဲ့လမ်းကြုံလို့ များ ကျနော့ နွဲ့ ဆိုးလေးကို တွေ့ ခဲ့ ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့ …
“တော်စမ်းပါကွာ တောတွင်းပျော်…! မင်းရဲ့အရည်မရအဖတ်မရ အသဲကွဲဇာတ်ပျက်ကြီးကို အချိန်ကုန်ခံ၊
ငွေကုန်ခံ၊ မျက်စိအညောင်းခံ သည်းခံဖတ်ပေးတာကိုတောင်မှ အားမနာ ငါတို့ ကို နွဲ့ ဆိုးဆီကို သတင်းပေးဖို့ 
ဆွဲစိနေသေးရသေးသလား၊ ဒီလို ဒေါင့် မကျိုး အချိုးမကျတဲ့မင်းရဲ့အရေးအသားတွေကို ရပ်တန်းကရပ်လိုက်စမ်း” လို့ 
ဒေါသကလေးများနဲ့မေတ္တာများပွားခဲ့ ကြမယ်ဆိုရင်…
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ခင်ဗျာ…။ ဒီပိုစ်ကို ဒီမှာတင်ပဲ ရပ်လိုက်ပါတော့ မယ်နော်။
စာရေးရတာ လက်မောသွားတဲ့ 
ရသ အရေးကောင်းးး ဖန်တီးမှု အား ကောင်းလိုက်တာ လို့ ပြောရင် လိုတောင် လိုဦးမယ်ထင့်
.ခုတလော တောတွင်းပျော် ခံစားမှုရော လက်တွေပါသွက်နေပါလား…ဇတ်လမ်းလေးက လွမ်းစရာ
တောထဲ NGO တွေ စစ်ဆေးရေးဝင်လို့အလုပ်ခဏနားနေတုန်း ရေးထားတာလေးတွေ
နွဲ့ဆိုးက ​သေသွားတာလား လင်​ယူသွားတာလား ဘာလား ညာလား ​ဝေခွဲမရ အင်း ငါလည်း မူးပြီ​ပြောရ​အောင်​ လက်​ဖက်​ရည်​ တစ်​ခွက်​ပဲ ​သောက်​ထားမိ​သေး
ရှုံ့ချည်နှပ်ချည် ဖီလင် ကို ပေးသွားပေသော စာတစ်ပုဒ်ပါပေ